Today Important Data (3.10.2019) – King of Future
Today Important Data (3.10.2019)
Posted October 3, 2019 kingoffuture
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် UK နိုင်ငံမှ စက်တင်ဘာလအတွက် Composite PMI ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Composite PMI Index သည် ကဏ္ဍနှစ်ရပ်လုံးတွင်ရှိသော Purchasing Manager များ၏ လှုပ်ရှားမှုပမာဏကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၅ဝ အောက်သတ်မှတ်ခြင်း သည် လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ပြီး ၅ဝ မှတ်အထက်သည် တိုးတက်မှုရှိသည်ကို ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းပမာဏထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ပမာဏများပြားပါက GBP တန်ဖိုးမြင့်တက်စေနိုင်ပြီး ပမာဏနည်းပါးပါက GBP တန်ဖိုးကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင်လည်း UK နိုင်ငံမှ စက်တင်ဘာလအတွက် Service PMI ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Service Purchasing Managers’ Index (PMI) သည် ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တွင်ရှိသော purchasing manager များ၏ လှုပ်ရှားမှုပမာဏကို တိုင်းတာသည်။ ၅ဝ မှတ်နှင့်အထက် တိုင်းတာခြင်းသည် တိုးတက်မှုရှိသည်ကို ပြဆိုပြီး ၅ဝ မှတ်အောက်တိုင်းတာခြင်းသည် လိုအပ်ချက်များရှိသည်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းထားသည့် ပမာဏမှာ 50.3 ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များပြားပါက GBP တန်ဖိုး မြင့်တက်စေနိုင်ကာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် နည်းပါးပါက GBP တန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်စေပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီခွဲအချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စက်တင်ဘာလအတွက် ISM Non-Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI) ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်ခြင်းမရှိသော စီးပွားရေးနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံတိုင်းတာနိုင်သည့် ညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းထားသည့်ပမာဏမှာ 55.0 ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းထားသည်ထက် နည်းပါးပါက USD တန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ကာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များပြားပါက USD တန်ဖိုးမြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်။
⟵USD/CAD Intraday: watch 1.3175.
GBP/JPY intraday: rebound⟶
EUR/GBP intraday: rebound towards 0.8637(12.11.2019)
Gold spot Intraday: key resistance at 1460.00.(12.11.2019)
EUR/USD Intraday: key resistance at 1.1065.( 8.11.2019)
GBP/JPY intraday: the downside prevails as long as 140.47 is resistance (8.11.2019)
Gold spot Intraday: look for 1452.00.( 8.11.2019)
EUR/GBP intraday: rebound towards 0.8637(12.11.2019) November 12, 2019
Gold spot Intraday: key resistance at 1460.00.(12.11.2019) November 12, 2019
EUR/USD Intraday: key resistance at 1.1065.( 8.11.2019) November 8, 2019
GBP/JPY intraday: the downside prevails as long as 140.47 is resistance (8.11.2019) November 8, 2019
Gold spot Intraday: look for 1452.00.( 8.11.2019) November 8, 2019